- ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? စိတ်ရဲ့သဘောတွေက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အရင်သိအောင်၊ နားလည်အောင်လုပ်။ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်ဆိုတဲ့ ခြောက်ခုကြောင့် အာရုံခြောက်ပါးဖြစ်။ မွေးတည်းက ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ ခံစားစိတ်၊ မှတ်သားစိတ်၊ သိတဲ့စိတ်၊ လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းပြုလုပ်တဲ့စိတ် စတဲ့ စိတ်လေးမျိုး။ အာရုံခြောက်ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ နာမည်ပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်တွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာ။ စိတ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲများများ မိမိစိတ်ထဲကို တစ်ကြိမ်မှာ စိတ်တစ်ခုတည်းသာ ၀င်ခွင့်ရှိတာကို သဘောပေါက်အောင် သိကြည့်။ ၀င်လာတဲ့စိတ်ဟာလည်း ခဏလေးသာ သက်တမ်းရှိနေပါလားလို့ ထပ်သိကြည့်။ ၀င်လာသမျှ စိတ်တစ်ခုချင်းကို လက်မခံဘဲ စောင့်ကြည့် သိမှတ်နေတဲ့ အသိနဲ့ သိကြည့်နေရင် မိမိစိတ်ထဲမှာ ဘာစိတ်မှဝင်ခွင့်မရဘဲ သိရုံလေးသိနေတဲ့ သိခြင်းတစ်ခုတည်းသာ ရှိနေရမယ်။ အဲဒီသိနေတဲ့ အသိဟာလည်း သိပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ မရှိတော့တာကို ထပ်သိနေရမယ်။ သိစရာရော သိနေတဲ့အသိ အပါအ၀င် အရာရာဟာ မရှိတော့ဘူးနဲ့ အဆုံးသတ်နေတဲ့သဘောတရားကို ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ကျကျ သိကျင့်နိုင်ရင် ဒုက္ခက လွတ်မြောက်ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သိရုံသိတဲ့ စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ ခံစားနေတဲ့ စိတ်တစ်ခု ရှိနေလို့သာ ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သဘောကို သိသွားလို့ပဲ။ ဒုက္ခကလွတ်တယ်ဆိုတာ မရှိခြင်းအမှန်တရားကို သဘောပေါက်ပြီး မခံစားပဲနေလို့သာ ဒုက္ခက လွတ်တာပါလားလို့ သိသွားတာ။ စိတ်ထဲဝင်လာတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းကိုသာ နိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို အတိအကျ သဘောပေါက်သွားရင် ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြလိုက်တဲ့ အသိအစစ်ပဲ။
- မျက်လှည့်တို့၊ လက်လှည့်တို့ဆိုတာ ပွဲကြည့်ပရိသတ် ကြည့်နေလျက်နဲ့ လက်တစ်လုံးခြား လိမ်ပြနေတဲ့ အတတ်ပညာ တစ်ခုပဲ။ ပရိသတ်ကလည်း သိလျက်နဲ့ မိမိစိတ်ကို အလိမ်ခံနေတာပဲ။ လိမ်တဲ့လူရဲ့ အစွမ်းလား? အလိမ်ခံနေရတဲ့သူရဲ့တွေးခေါ် မြော်မြင်မှု အားနည်းချက်လား?
- ဘ၀ပျက်အောင် နှိပ်စက် အနိုင်ကျင့် စော်ကားခံခဲ့ရတာကို လုံးဝခွင့်မလွှတ်ဘဲ လက်တုံ့ပြန်ခွင့်ရရင် ကလဲ့စားချေဖို့ ပြင်ဆင် ထားတဲ့စိတ်။
- အရာရာဟာ ခဏလေးပဲဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား? လက်တွေ့ပြ!
ခန္ဓာငါးပါးရှိနေလို့ ဒုက္ခတွေဆက်တိုက်ရောက်တယ်ဆိုတာ သေချာလား? လက်တွေ့ပြ!
အာရုံခြောက်ပါးက စိတ်မှာ လာထိတဲ့အထိအတွေ့ကို မဖြတ်နိုင်လို့ ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား? လက်တွေ့ပြ!
- ဒုက္ခထဲက လွတ်မြောက်စေတဲ့ တကယ့် ကျင့်စဉ်အစစ်က လက်တွဲခေါ်လို့ မရပါဘူး။ ဒုက္ခက လွတ်မြောက်ချင်ရင် လွတ်မြောက်စေတဲ့ ကျင့်စဉ်က ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ လွတ်မြောက်ကြောင်းနည်းကို နားလည်အောင် ပြောပြ၊ ရှင်းပြပေးရုံပဲရှိတယ်။ လွတ်မြောက်ကြောင်း ကျင့်စဉ်ကသာ လက်တွဲခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ (လွတ်မြောက်ကြောင်း ကျင့်စဉ်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်တွေ့ အားထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့ မိမိကိုလက်တွဲခေါ်နေသူဟာ လွတ်မြောက်ကြောင်း ကျင့်စဉ်အမှန်အတိုင်း အားထုတ်နေတဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ။)